Ihe nkiri Dichroic
Dichroic Film (Self nrapado)
Ihe nkiri PVC Dichroic
Dichroic TPU Nkiri
Ihe nkiri Window Dichroic
Dichroic PET Nkiri
Ihe nkiri Holographic
Oyi zọ Foil
Chill Dichroic Iridescent Window Film maka Glass Ma ọ bụ A ...
0.2mm Dichroic Iridescent PVC film kpokọtara Ihe ...
Blue Dichroic Iridescent film PET ihe maka ndozi ...
0.4mm Dichroic Iridescent PVC ihe nkiri maka ịme akpụkpọ ụkwụ, ...
Hot zọ Foil China Manufacturer PET Ihe maka plastic na akwụkwọ
Anyị na-enye 12micron 64cm * 120m Hot zọ Foil China Manufacturer PET Ihe maka plastic na akwụkwọ. Anyị na-e pụrụ iche na-ekpo ọkụ zọ foil n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ ndị Asia na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Hot zọ Foil Okpomọkụ Nyefee maka Kaadị na Akwụkwọ
Anyị na-enye foils mbio metalized gold, ọlaọcha, na dara na agba; otutu pigments (ewepụghị, ọkara gloss na gloss); osisi ọka, mabul, chrome, akpụkpọ anụ mmetụta; iji kpochapu, kpochapu, pearlescent, na holographic. Anyị na-e pụrụ iche na-ekpo ọkụ zọ foil n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ ndị Asia na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Oyi Cold zọ Foil China Manufacturer UV mama maka akwụkwọ, labeelu, plastic
Anyị na-enye 12micron 64cm * 120m Cold Stamping Foil China Manufacturer UV Glue maka akwụkwọ, label, plastic. Anyị na-e pụrụ iche na zọọ foil n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ ndị Asia na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Holographic Metally Lamination Film Dị Iche Iche PITA & BOPP maka Akwụkwọ Board na mbukota
Anyị na-enye Holographic Metalized Lamination Film Dị Iche Iche PET & BOPP maka Akwụkwọ Board na mbukota. Anyị na-e pụrụ iche na mbukota film n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Blaze Dichroic Iridescent Window Film maka Glass Ma ọ bụ Acrylic
Anyị na-enye 70u + 23u Dichroic Iridescent Window Film 3M quality PET Material mylar Reflective for Glass or Acrylic decoration. Anyị na-e pụrụ iche na mbukota film n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Chill Dichroic Iridescent Window Film maka Glass Ma ọ bụ Acrylic
Egwurugwu Iridescent Self nrapado Window Nkiri jupụtara n'ime oghere gị na ịgbanwe agba ọkụ mgbe niile ma dị na textures na ọkwa dị iche iche nke nnyefe ọkụ. Iridescent Glass Film na-enyekwa nzuzo dị mma site na ịchebe ọhụụ ọhụụ na ikwe ka nnyefe ọkụ dị mma .. Anyị bụ ọkachamara na ihe nkiri eji achọ ihe karịrị afọ 15, ihe nkiri windo anyị dị egwu na-ewu ewu n'ọtụtụ ahịa Europe na America. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
0.4mm Dichroic Iridescent TPU Ihe nkiri maka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ, akpa na mma
Anyị na-enye Dichroic Iridescent TPU film 2020 Magical Material maka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ, akpa na ịchọ mma. Anyị na-pụrụ iche na mma nkiri n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
0.2mm Iridescent TPU Ihe nkiri maka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ, akpa na mma
Iridescent TPU Film Rainbow Color Magical Ihe eji eme akpụkpọ ụkwụ, akpa na ịchọ mma ka nke TPU na PET iridescent film. Ọ bụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi zuru oke maka ịchọ mma nke akpa akpụkpọ ụkwụ na ụdị ụdị ọ bụla. Anyị na-pụrụ iche na mma nkiri n'ihi na ihe karịrị afọ 15, anyị na-ewu ewu na ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị ji obi anyị nile na-atụ anya na-gị ogologo oge onye na China. Kpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga-anwa ike anyị niile iji nweta afọ ojuju gị.
Ihe nkiri 0.4mm Dichroic Iridescent PVC maka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ, akpa na mma
Anyị na-enye Dichroic Iridescent PVC film 2020 Magical Ihe eji eme akpụkpọ ụkwụ, akpa na ịchọ mma. Anyị na-pụrụ iche na mma nkiri n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
0.2mm Dichroic Iridescent PVC ihe nkiri Ihe eji achọ mma, mma nka na nka
0.2mm Dichroic Iridescent PVC film Ihe eji achọ mma maka ịchọ mma, imepụta ihe na nka bụ lamination nke PVC na ihe nkiri iridescent, nke etinyere ebe niile na akpa akpa, akpụkpọ ụkwụ na uwe. Ọ bụkwa ihe dị mma maka imepụta nka na ịme nka. Anyị na-ezite ụdị ihe ịchọ mma niile maka ihe karịrị afọ 15, a na-ere ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ahịa Europe, America na Eshia. Kpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga-enye gị ezigbo mma yana ọrụ kacha mma.
Blue Dichroic Iridescent film PET Ihe eji achọ mma
Anyị na-enye 26 Micron Dichroic Iridescent film 2020 elu mma PET Ihe mylar maka ịchọ mma ojiji. Anyị na-e pụrụ iche na mbukota film n'ihi na ihe karịrị afọ 15, ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane Nkiri maka Mbukota Dechọ Mma
22 Micron Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane Film Magical PET Ihe mylar maka Mbukota bụ otu agba ngwaahịa nke ihe nkiri ịchọ mma anyị. Ngwaahịa anyị gụnyere Dichroic film, Self nrapado Dichroic Film, Dichroic Window film, Holographic film. All ndị a na-n'ọtụtụ ebe maka mbukota, mma, art imewe wdg Anyị na-pụrụ iche na ji achọ mbukota film n'ihi na ihe karịrị afọ 15, na-emepe emepe ọtụtụ nke European, American na Asia ahịa. Anyị ji obi anyị nile na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Anyị, Jiangxi Royal Import & Export Co. Ltd., nwere ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na Hot Stamping Foils, Holographic Film, Iridescent / Dichroic Film, Iridescent / Dichroic Window Film, Iridescent PVC / TPU Film, Fine Chemicals na ndị ọzọ…
Rm 501 Global Center, Eze Gan Gan, Yanjiang Mid. Zọ, Nanchang, China
Nke anyi Ngwaahịa